Sarimihetsika - Safelika : Lavon’ny aretina efa nandazo azy Rabodo -
AccueilVaovao SamihafaSarimihetsika – Safelika : Lavon’ny aretina efa nandazo azy Rabodo
Sarimihetsika – Safelika : Lavon’ny aretina efa nandazo azy Rabodo
30/11/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Endrika tsy zoviana eo amin’ireo mpankafy sarimihetsika, indrindra ny mpanaraka ilay tantara mitohy novokarin’ny Scoop Digital, “Safelika”. Nodimandry ny 28 novambra lasa teo, ary lavon’ny aretina efa nandazo azy Raholialisoa Mamy Hortense, izay fantatra tamin’ilay solon’anarana Rabodo. Anarana nisalorany tao anatin’io tantara mitohy io. Ny volana janoary no efa tao anatin’ny tsy fahasalamana ity mpanakanto ity. Ankoatra ny filalaovana sarimihetsika dia nanan-talenta tamin’ny filalaovana tantara tamin’ny onjam-peo ihany koa izy, ary fantatra teo amin’ny sehatry ny mozika tao amin’ny tarika Mamy Andy Lala.
Andrasana eny amin’ny trano fonenany eny amin’ny Cité Akany Sambatra eny Itaosy ny nofo mangatsiakany, ary hiala ao ny sabotsy 2 desambra amin’ny 11 ora sy 45 minitra, entina hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra, sy ho fampaherezana ny fianakaviana ao amin’ny Fiangonana METM Cité Itaosy, mialohan’ny hametrahana azy ao amin’ny fasan-drazany eny Ambohidavenina Ampitatafika.
58 taona Rabodo izao namela ho kamboty ireo mpilalao ao amin’ny Team Safelika izao, ary namela kamboty mianadahy ihany koa. Izahay eto amin’ny gazety Triatra dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana sy ny ekipan’ny Scoop Digital.
Miainga eny ifotony. Izay no laharam-pahamehan’ny antoko Hery Vaovaon’i Madagasikara eto Analamanga, na ny HVM Analamanga. Araka izany, nidina ifotony tany amin’ny distrikan’i Manjakandriana ny mpandrindra rezionalin’ny HVM Analamanga, Ndranto Rakotonanahary, sy ny ekipany, omaly. ...Tohiny
Fitakian’ny mpampianatra : Lasa sorona ny fanabeazana
CENI : Mampiseho ny mangarahara araka ny lalàna